आजकल यस्ता कयौं उदाहारणहरु सुन्न र देख्न पाइन्छ । जहाँ धेरै युवा विवाहित महिलातर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् ।हलसालै भएको एक अनुसन्धानका अनुसार यो तथ्यलाई पनि पुष्टि गरेको छ ।
शोधमा यसको पछिको कारण पनि बताइएको छ आखिर पुरुलाई विवाह गरेको महिला अन्य युवतीको तुलनामा किन आकर्षक लाग्छ ? युवाले विवाहित महिलालाई किन डेट गर्ने इच्छा राख्छन् ? त्यसका केही कारण यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
विवाह गरेका महिला विवाह नगरेका युवतीको तुलनामा अधिक आत्मविश्वासी हुन्छन् । उनीहरुको यही आत्मविश्वासका कारण अविवाहित युवा उनीहरुप्रति आकर्षित हुन्छन् ।पुरुषहरुलाई विवाहित महिलाले हरेक समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ।
विवाह गरेका महिलाले विवाह नगरेकाको तुनलामा पार्टनरको धेरै हेरचाह गर्छन् ।विवाह पछि उनीहरुलाई सधै आफ्नो घर परिवारको चिन्ता हुने गर्छ । युवालाई युवतीको यस्तो हेरचाह विशेष मन पर्छ ।
हर्मोनमा आएको परिवर्तन
विवाह पछि महिलाको हर्मोनमा परिवर्तन आउँछ । यसका कारण उनीहरुको छालामा चमक आउँछ । महिलामा आएको यस्तो परिवर्तनले पुरुषलाई आकर्षित गर्छ ।
शा री रि क सम्पर्क
विवाहित महिला तर्फ अविवाहित पुरुष आकर्षित हुनाको अर्को पक्ष शा री रि क सम्पर्क रहेको छ ।सम्बन्ध बारेको प्रस्तावका लागि अविवाहित भन्दा विवाहित सहज हुने युवाहरको अनुमान र अपेक्षा हुन्छ ।
नोट: माथि उल्लेखित जानकारी विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो।यी बिषयवस्तुहरु केवल जानकारीको लागी मात्र यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ।तपाइहरुको १ शेयरले हामीलाई अगाडी बढ्न मद्दत पुग्दछ । त्यसैले कन्जुसाइ नगरीकन शेयर गरिदिनुहोला ।अन्तिम पटक अपडेट गरिएको
२०७८ श्रावण १५, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 512 Views